दात किराले खाएर निकै तनावमा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु उपचार, एक सातामै छुट्कारा पाउनुहुने छ (भिडियो सहित)
Home / स्वास्थ्य / दात किराले खाएर निकै तनावमा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु उपचार, एक सातामै छुट्कारा पाउनुहुने छ (भिडियो सहित)
दात किराले खाएर निकै तनावमा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु उपचार, एक सातामै छुट्कारा पाउनुहुने छ (भिडियो सहित) 0
एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा झन्डै ८० प्रतिशत मानिसहरु दातको समस्याबाट ग्रसित छन् ।
हाम्रो मुख भित्र ७ सय देखी ९ सय प्रकारका ब्याक्टेरिया हुन्छन् । त्यसमध्येको एक हो ‘स्टेप्टोकोकस ब्याक्टेरिया’ । हामीले खाएका पदार्थहरु जब दात र गीजाको बीचमा, दाँतको चपाउने भागमा वा दाँतहरुबीचको कापमा दन्तलेउको रुपमा अड्केर बस्छ स्टेप्टोकोकस ब्याक्टेरियाले तत्काल एसिड उत्पादन गर्न थाल्छ ।
सो एसिडले बाहिरी तह अर्थात ‘इनामेल’ खिइन थाल्छ । सोही खिएको ठाँउबाट ब्याक्टेरिया दाँतको भित्री भागमा छिर्छ र जति भित्र जान्छ संक्रमण बढाउदै जान्छ ।दातलाई जोगाउन अनेक प्रयास गरे पनि कहिले काही दात किराले खाने गर्दछ । दातलाई किराले खान बाट रोक्न सर्ब प्रथम सफा गरि रहन पर्दछ । खानपिन पछि दातलाई सफा गरि हाल्नु पर्दछ जसले दातमा टासिएको खाने कुरा नरहोस् ।
बिशेष गरेर गुलियो मिठाई खाए पछि दातलाई तुरुन्तै सफा गर्नु पर्दछ । गुलियोमा दात किराले खाने प्रबल सम्भावना हुन्छ । तर यी सबै गर्दा गर्दै पनि दात किराले खायो भने कसरी त्यसबाट छुटकारा पाउने त ? अपनाउहोस यी घरेलु उपाय ….।
ओठको कालोपन हटाउने ९ प्राकृतिक उपाय
खाली पेटमा मह मिसाएर दैनिक एक पोटी लसुन खानुहोस्, यी १० फाइदा लिनुहोस्